Huawei P10 Lite 8 tapitrisa nozaraina nanerana ny planeta | Androidsis
Huawei dia mizara 10 tapitrisa P8 Lite manerantany
Huawei dia iray amin'ireo fahagagana lehibe indrindra tamin'ny 2015, na dia efa izany aza tamin'ny 2014 dia tsapa fa hanana taona mahafinaritra hafa izy Izany dia hanamafy ny fitomboan'ny vokatra ataon'ity mpanamboatra sinoa ity izay afaka nandray ny dingana tsirairay tamim-pahamendrehana mba hialoha ireo orinasa hafa manan-danja lehibe, toy ny LG. Ny fahombiazany dia mifototra amin'ny fahitana fifandanjana amin'ny vidin'ny terminal, ny famolavolana ary ny fakan-tsarimihetsika mampiseho fika tsara amin'ny ambaratonga ankapobeny. Io dia namela azy hamaky an-tsena isan-karazany ary hampiseho tarehimarika firaketana hametrahana azy ho mpanamboatra finday avo lenta fahatelo manerantany, nohon'ny Samsung sy Apple ihany no nahalalantsika vao haingana.
Androany dia nanambara izy fa nanao izany nizara singa maherin'ny 10 tapitrisa an'ny P8 Lite eran-tany, dingana lehibe iray vitany tao anatin'ny sivy volana nanjelanjelatra ny fitaovana hatramin'ny nanombohany tany Eropa tamin'ny taon-dasa. Ankoatry ny fizarana ity fampahalalana ity dia niresaka ny fomba nivarotan'ny andian-tsarimihetsika P8 ny isan'ny terminal 16 tapitrisa nanerana ny planeta, izay fambara tena tsara tsy hahafantarana fotsiny ny isan'ny telefaona nozaraina, fa ireo izay tena nahatratra ny tanan'ny mpampiasa an-tapitrisany izay manana an'ity mpanamboatra ity ho tianao indrindra amin'ny asany andavanandro amin'ny finday avo lenta.
1 Telefaona manokana amin'ny 199 €
2 Mpivarotra tsara indrindra any ivelan'i Sina
Telefaona manokana amin'ny 199 €
Si mandinika ny fahombiazan'ny Huawei P8 Lite izahay afaka mahita ny anton'izany ianao. Ao amin'ny fitaovany, ny efijery HD 5-inch (1280 x 720 teboka) IPS LCD sy puce octre-core na valo-core HiSilicon Kirin 620 dia mahavariana amin'ny hafainganam-pandeha 1.2 GHZ Cortex A53. Ity processeur ity dia miaraka amin'ny Mali 450 GPU ao anaty quad-core na quad-core configur izay mamela azy hanana, amin'ny ankapobeny, ny fanodinana avo lenta hanipazana ny karazan-dalao sy rindran-tsary rehetra.
Ny sisa amin'ny famaritana dia mandeha ho an'ny Fahatsiarovana RAM 2 GB, Fitehirizana anatiny 16 GB, fakantsary 13 MP ary eo anoloana 5 MP, hamaranana amin'ny bateria 2.200 mAh. Ao amin'ny rindrambaiko Android 5.0.2 Lollipop sy ny layer manokana fantatra amin'ny anarana hoe Emotion 3.1 UI, izay misy karazana fampiharana sy fampiasa manokana hanasongadinana ny tombontsoan'ny orinasa ihany.
Raha manampy endrika tsara isika, dia iray amin'ireo teboka manaitra an'i Huawei, amin'ilay vidiny 199 € (Azo zahana amin'ny fihenam-bidy izao ao amin'ny The Phone House) azontsika antoka fa azontsika notsoahina satria nizara singa 10 tapitrisa manerantany.
Mpivarotra tsara indrindra any ivelan'i Sina
Ny P8 Lite dia manana ny mampiavaka azy manokana raha ampitahaintsika amin'ny telefaona hafa avy amin'ity mpanamboatra ity, ary io no smartphone voalohany azonao varotra tsara indrindra amin'ny tsena iraisam-pirenena noho ny tany niavianao.
Raha miverina amin'ireo tarehimarika nomen'ny orinasa isika dia afaka mahita izany any amin'ny Huawei marikao fa any ivelan'ny firenenao ny lalanao, zavatra mifanohitra tanteraka amin'ny Xiaomi, izay mivarotra betsaka kokoa ao Shina noho ny any ivelany, na dia manana dokambarotra be aza izy ary amidy toy ny donuts amin'ny alàlan'ny tranonkala fanafarana ny terminal. Tamin'ny volana Janoary tamin'ity taona ity ihany dia nizara smartphone 12 tapitrisa miaraka amin'ny fitomboana 93% raha oharina amin'ny vanim-potoana mitovy tamin'ny taon-dasa.
Io volana Janoary io ihany no manamarika ny fahefatra misesy izay amarotan'ny mpanamboatra 10 tapitrisa mahery terminal terminal isam-bolana. Tarehimarika iray izay mametraka antsika alohan'ny refy alain'ity orinasa ity manerantany ary toa nifantoka tamin'ny tanjony mihoatra ny Samsung io raha tsy tadiavintsika ny hahatakatra azy.
Tamin'ny taon-dasa dia nizara izany smartphone maherin'ny 109 tapitrisa, izay midika a Fitomboana 44 isan-jato raha oharina tamin'ny tamin'ny taon-dasa. Miaraka amin'io isan'ny tobim-pifandraisana 109 tapitrisa io dia lasa mpanamboatra finday finday sinoa voalohany mihoatra ny isa mitentina 100 tapitrisa eran-tany izy. Noho izany dia tsy maintsy mitandrina ny dingana manaraka ataon'ity mpanamboatra ity isika fa efa napetraka tsikelikely tao amin'io toerana fahatelo io mba hanombohana mijery an'i Samsung mivantana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Huawei dia mizara 10 tapitrisa P8 Lite manerantany
ary eto fa tokony mivoaka ny m8 fa tsy mivoaka. tara hoy izy ireo 16 andro
Tadeo dia hoy izy:
Mampalahelo fa na dia ny haben'ny varotra izay hireharehany aza, dia manapa-kevitra ny hanavao izany amin'ny 6.0
Valiny tamin'i Thaddeus
lerolero dia hoy izy:
Omaly aho nametraka Android 6 tao amin'ny lite, mbola tsy misintona amin'ny fomba ofisialy fa ho tonga 🙂
Valio i lerolero
[APK] Sintomy ary apetraho ilay Launcher Xperia Android M vaovao ho an'ny terminal Android rehetra